Ny Moto 360 2015 dia azo jerena amin'ny sary | Androidsis
Efa vitsy ny sisa tavela amin'ny fanambaràna ny andiany faharoa amin'ny smartwatch manaraka avy amin'ny orinasa amerikana Motorola hatao tompon'andraikitra. Ny moto 360 2015, no iray amin'ireo fitaovana malaza indrindra tato ho ato ao amin'ny bilaoginay, noho ireo fivoahana izay niaretan'ny ho avy ny Motorola.
Ity smartwatch ity dia antenaina haseho amin'ny tapaky ny fahavaratra ary hizara ny sehatra amin'ireo terminal Motorola vaovao izy: Moto G, Moto X Style ary Moto X Play. Na izany aza, tsy tonga ny fanambarana ofisialy ny famantaranandro vaovao an'ny orinasa amerikana, namela mpampiasa sy mpanjifa marobe te hahalala bebe kokoa momba ny smartwatch amerikana ho avy.
Ankehitriny ary amin'ny fahatongavan'ny IFA, miverina ny tsaho fa azo aseho mandritra ny herinandro voalohany amin'ny volana septambra ny terminal. Ho fanampin'izay, tato ho ato dia hitantsika ny fanivanana ireo fika manokana sy sary vaovao an'ity fitaovana ity. Ny vaovao androany dia momba ny sary marina ary izany hoe, ny Moto 360 2015 dia nalaina sary tsy ofisialy.
Moto 360 2015: Moto 360S sy Moto 360L
Ireo sary ireo dia mampiseho izay efa tafaporitsaka hatreto. Misy ny resaka milaza fa hanolotra karazany roa amin'ilay famantaranandro malaza i Motorola, iray ny iray amin'ny anarana hoe Moto 360S ary ny iray hafa toa Moto 360L. Azontsika atao ny maminavina fa hisy kinova kely kokoa ho an'ny saribakoly kely kokoa (Moto 360S) ary ny iray hafa ho an'ny saribakoly lehibe kokoa (Moto 360L). Manohy ny sary dia hitantsika ny fiovan'ny endrika raha ny amin'ny taranaka voalohany.
La satroboninahitra niova ny toerana manondro amin'ny 2 tolakandro, ny strap rafitra niova koa Raha dinihina avy amin'ny sary dia mety misy tadin-tsarimihetsika ambany kokoa hahamora azy ireo ho an'ny mpampiasa. Ao amin'ny Hardware, voalaza fa Motorola mety ho fitaovana ny famantaranandro marani-tsaina ambanin'ny Snapdragon 400 na 410, ankoatry ny fanitarana ny fahaizan'ny bateria raha ampitahaina amin'ny taranaka voalohany.
Araka ny fantatrao tsara, ny IFA any Berlin no foibe lehibe farany tamin'ny taona, ka orinasa maromaro, izay i Motorola no eo ambanin'ny Lenovo, no ho eo amin'ity hetsika ity. Motorola sy Lenovo dia misy fanambaràna vitsivitsy amin'ny herinandro ho avy. Ny Moto 360 2015 dia iray amin'ireo fanambarana ireo ? Ho hitantsika izay hitranga amin'ny farany. Tsarovy fa hanatrika ity foara lehibe farany amin'ny taona ity isika, koa araho ny bilaogy sy ny mombamomba anay amin'ny tambajotran-tseraserantsika hahitanao izay hitranga mandritra ny IFA 2015 any Berlin.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ny Moto 360 2015 dia azo jerena amin'ny sary
Obi Worldphone, marika an'ny CEO Apple teo aloha John Culley dia manolotra ireo finday roa voalohany